U THUREIN AUNG - Yangon Hotel Expo 2019
Program Officer (Research & Outreach)
U Thurein Aung worked in education and tourism for 10 years before joining Yangon Heritage Trust (YHT) in 2014 asaProgram Officer for research and outreach. The focus of his research is the history of Yangon, providing historical significance assessments in heritage conservation projects. He manages Blue Plaque Project and YHT’s acclaimed walking tour program.
He takesagreat interest in diverse subjects such as anthropology, sociology and history. Born and raised in Yangon, he is inspired by Yangon’s rich history and its heritage. He joined YHT to playapart in ushering inamodern city which keeps its heritage and character intact. He is alsoaclimate change activist.
ဦးသူရိန်အောင်သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွင် သုတေသန နှင့် ကူညီပံ့ပိုးခြင်း ဆိုင်ရာ Program Officer အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပြီး ပညာရေးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း နယ်ပယ် တွင် (၁၀) နှစ်ကြာအောင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ သမိုင်းအကြောင်းကို သူ၏ သုတေသနပြုလုပ်ငန်းတွင် အလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ရေး စီမံကိန်းများတွင် ရှေးဟောင်းသမိုင်းဆိုင်ရာ အရေးပါမှုများကို အကဲဖြတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဦးသူရိန်အောင်သည် Blue Plaque စီမံကိန်းကြီးကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး Yangon Heritage Trust ၏ လမ်းလျှောက် လေ့လာရေးခရီးစဉ် စီမံကိန်းကြီးကိုလည်း အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
ဦးသူရိန်အောင်သည် ကွဲပြားခြားနားသော ဘာသာရပ်များဖြစ်သည့် မနုဿဗေဒ၊ လူမှုဗေဒ၊ သမိုင်းမှတ်တမ်းများကို အထူးစိတ်ဝင်စားသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်သည့်အလျောက် ရန်ကုန်မြို့၏ အဖိုးထိုက်တန်လှသည့် သမိုင်းကြောင်းနှင့် အမွေအနှစ်များကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသူဖြစ်ပါသည်။
ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် နှင့် ပုံရိပ်လက္ခဏများကို ပကတိအတိုင်းမပျောက်မပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ထားသည့် ခေတ်မီမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန် ဦးသူရိန်အောင်သည် Yangon Heritage Trust တွင်ကဏ္ဍသစ်တစ်ရပ် ဖွင့်ကာ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။